I-Sharkoon Skiller SGM3, ukutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nokukhetha ngexabiso elikhulu | Iindaba zeGajethi
Ukungapheli kweemveliso kudlula ezandleni zethu, i-automation yasekhaya, iselfowuni, izixhobo ezahlukeneyo ... Asinakuphoswa yimveliso yokudlala, enye yezo sithanda ukuzama kakhulu kuba siyazi ukuba ngale ndlela sinokukunceda uthathe isigqibo ngaphakathi imarike eneendlela ezininzi. Ngeli xesha sikunye nemveliso evela kwiSharkoon, inkampani yaseJamani enembali ende ekuphuhliseni izinto zomdlalo wePC kunye nexesha elithile kunye nemida ngexabiso elifanelekileyo. Sinetafile I-Sharkoon's Skiller SGM3, isizukulwana sesithathu semouse yokudlala ngoku engenazingcingo, fumanisa kolu hlaziyo yonke into oyifunayo ngaphambi kokuba uthenge.
Njengesiqhelo, ukuba sele ucacile okanye uthathe isigqibo sokuba uza kufumana iyunithi yale mveliso, sicebisa ukuba uyithenge IAmazon isuka kwi-39,99 euros (unxibelelwano), okanye ukubheja ngqo kwiwebhusayithi esemthethweni ye- Sharkoon ukuyazi ngokweenkcukacha kunye neendawo ezahlukeneyo zentengiso kunye neziqhelekileyo zentengiso apho unokufumana khona iimveliso zabo. Ngoku hlala phantsi kuba siza kukubonisa imifanekiso eneenkcukacha ngale Sharkoon Skiller SGM3, ulungile?
1 Izixhobo kunye noyilo: Isidima kodwa iyasebenza
2 Ukucaciswa ngokubanzi kunye namaqhosha afumanekayo
3 Kwiintlobo ngeentlobo incasa: Ukujija ngeentambo, ngaphandle kwamacingo kunye nokutshaja kweQi
Izixhobo kunye noyilo: Isidima kodwa iyasebenza
Sifumana imouse yokudlala kunye noyilo olunobungqongqo kunye nolwaphulo. Ifemu yaseJamani ibisoloko ibonakaliswa ngokwenza iimveliso zayo zibonakale zinomtsalane kodwa ngaphandle kokungena kubunewunewu obunqabileyo obuqheleke kakhulu kwintengiso. Le mpuku inobungakanani be-124,5 x 67 x 39 mm kwaye yenziwe ngokupheleleyo nge-polycarbonate. Ngaphandle kwevili lokuhambisa, elenziwe ngealuminiyam egutyungelwe ngerabha ukubamba ngcono. Singayithenga ngemibala emine eyahlukeneyo, konke kugqitywe nge-matte ukubonelela ngokucoca okukhulu kunye nokubambelela: Mhlophe, ngwevu, mnyama kunye nohlaza komnquma. Sijonge imouse ngaphandle kokuba ikhebula elixhunyiwe linobunzima beegram ezili-110, ukukhanya kakhulu.
Sinamaqhosha adityanisiweyo kwimeko, kunye nobunzima obuhanjiswe kakuhle. Amanqaku asezantsi ama-4 anokutshintshwa okuskrola iipads (kubandakanya ukubekelwa ngaphakathi endlwini) kunye ne Ihlawulisa imouse Qi. Amaqhosha onke ane indawo elungileyo, nkqu nesilayida esiphakathi esiya kuthi sisivumele ukuba sihlengahlengise i-DPI. Imouse esembindini ichotshelwa lilogo yeSharkoon ekhanyiswe ngokulula nge I-RGB ye-LED eya kuthi isebenze njengesalathiso sebhetri kwaye kunjalo, isalathiso se-DPI ekhethiweyo. Sinokuhlengahlengisa iiparameter zokukhanyisa kwe-LED ngesoftware yayo efumanekayo yokukhuphelaunxibelelwano).
Ukucaciswa ngokubanzi kunye namaqhosha afumanekayo
Sifumana imouse enika usetyenziso olufanelekileyo kokubini kwinqanaba "lokudlala" kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla, ngokobuqu ndiyidibanisile kwezi ntsuku ukuze ndisebenze kwaye ndidlale ngaxeshanye, ndingafumani mida kuyo nayiphi na imiba yayo, uyilo luyi-Sober as nokuba ndlongondlongo, inokusetyenziswa yonke imihla ngaphandle kokuphazamiseka. Inayo iadaptha engenazingcingo ye-2,4 GHz, i-USB eqhelekileyo ngaphandle kokuphola, ibonelela ngesenzisi sayo se-optical Ubuncinci be-DPI engama-600 kunye nobuninzi be-6.000 DPI Siza kulungelelanisa ukusebenzisa isilayida, chip elawula isixhobo yi-ATG4090 ngezinga eliphezulu le Ukuvota kwe-Hz ezili-1.000 XNUMX kunye Imilimitha ezi-2 zokufunda umgama. Iyahambelana neMac kunye neWindows ngokungafaniyo, nangona isoftware "yokudlala" iya kusebenza kwiWindows.
Sinamaqhosha asixhenxe ewonke phakathi kweyona iphambili, isilayidi se-DPI esineqhosha, elinye livili kunye namacala amabini. Amaqhosha esecaleni yi-OMRON Zonke zinokucwangciswa ngesoftware ebonisiweyo. Bakulungele ukunyamezela nantoni na engaphantsi Ukucofa izigidi ezili-10.000, ke ngekhe ubenangxaki kuloo nto.
Kwiintlobo ngeentlobo incasa: Ukujija ngeentambo, ngaphandle kwamacingo kunye nokutshaja kweQi
Ngokucacileyo sinayo kule Skiller SGM3 ebiza imali engaphantsi kwama-40 euros ngetekhnoloji ye-Qi yokutshaja ngaphandle kwamacingo, ke nawuphina umatshini onale ndawo unokuthintela ukukhutshwa kwe I-930 mAh ibhetri yayo akukho nto ingaphantsi, ebonelela ngokuzimela kwe Malunga neeyure ezingama-40 kwaye kuvavanyo lwethu ilungelelanisa nenyani, imizuzu phezulu, imizuzu ezantsi, kuxhomekeke kuqwalaselo lwe-RGB ye-LED, ukusetyenziswa kunye nezinye iiparameter. Nangona kunjalo, Abona bacocekileyo babona kule nto yokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nonxibelelwano olungenazingcingo ukukhubazeka Ukusetyenziswa, kwaye nangona kungabonakali kunika ulibaziseko, nazo ziya kuhlangabezana neemfuno zakho.
Ukuba sikubona kufanelekile Siza kuba nakho ukuyisebenzisa ngeMicrosoftUSB yayo kuqhagamshelo lwe-USB, ibandakanya intambo eboshiweyo yobude obulinganiselweyo beemitha eziyi-1,5 Ngokwimilinganiselo yethu, yenziwe ngegolide kwaye iya kubonelela ngonxibelelwano oluphezulu ngaphandle kokuphazamiseka kunye nokuzimela ngokusisigxina. Yonke into iya kuxhomekeka kwiimfuno zethu kunye nezinto esizithandayo, kwimeko yam ndikhethe ngokobuqu ukuyisebenzisa kuhlobo lwayo olungenazingcingo kwaye iziphumo ziyanelisa.
Njengoko benditshilo ngaphambili, bendikade ndisebenzisa le mouse ngokungacacanga kwi-macOS nakwiWindows, kufuneka nditsho ukuba kwiWindows, enkosi kwisoftware ebonelelweyo, ukhetho luye ngakumbi kwaye lungcono, kodwa kwiMacOS kuye kwafuneka ndiyisebenzise amathuba okwenza imisebenzi yemihla ngemihla yokubhala nokubhala, ngaphandle kwengxaki. Ngokuphathelele owona msebenzi uphambili ngumdlalo, Ngoseto lwesoftware yakho sifumana amava amnandi, kunzima ukukholelwa ukuba kubiza i-euro ezingama-40 kuphela xa ukhuphiswano lubonelela ngezinto ezifanayo phantse kabini, Apha uSharkoon ebefuna ukugqama.
Ndizikhumbula iindlela zokukhangela ivili
Kukho elinye iqhosha elisecaleni
Umphezulu werabha olungileyo, kodwa hayi kwicala
Imixholo elungileyo yebhokisi, yonke into icingelwe ngaphandle
Umgangatho wezinto kunye nephedi yamaqhosha
Isoftware elungiswe kakuhle
Qi intlawulo kunye nokuzimela okukhulu
Kucacile ukuba ayisiyiyo eyothusayo okanye enomtsalane, kwaye ayikaze ibe yinjongo kaSharkoon obonakala ngathi ukhetha olona luntu lubalulekileyo kwezokudlala, kodwa ii-ergonomics zilungile ngokwaneleyo ukuba zikhululeke kuzo zonke iinjongo kunye noyilo, uyilo lucocekile kwaye izinto ziyahambelana nexabiso lemveliso. Eyona nto iphambili kwisikhethi se-DPI kunye nokuchaneka kwevili. Ayisixeleli ukuba imouse iyatyibilika ngokuchanekileyo zombini nangaphandle kwephedi yemouse kwaye andikhange ndihlangane naluphi na unxibelelwano okanye iingxaki ezichanekileyo ngexesha lokuqhubeka kovavanyo.
Ungayifumana ukusuka kwi-39,99 in LONTO ngesiqinisekiso sokuba iAmazon ibonelela kwaye uya kuba nayo ekhaya ngosuku olulandelayo.
I-Sharkoon Skiller SGM3, ukutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nokukhetha ngexabiso elikhulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Sharkoon Skilller SGM3, imouse yokudlala enexabiso elifanelekileyo lemali
Ixabiso lokunyuka kweNetflix lifikelela kubo bonke abathengi